Qaar badan oo wax soo saarka casriga video kamaradaha qaab AVCHD ah, taasi waxay abuuraysaa MTS files in aad u baahan tahay si ay u dajiyaan galay Ciyaar si wada edit iyo shaqeeyaan sidaad doonaysid. Inkastoo qaab file waa heerka
1. Wax ka qabashada files MTS
Keenista files MTS waa hab fudud, bilowdo mashruuc cusub ka menu ugu weyn
Markaas waa inaad ku siin karaan magaca ku haboon iyo meesha qabsato files yihiin in ay ku taallaa sida caadiga ah.
Marka mashruuca lagu abuuray waxaa jira laba siyaabood oo loo wajaho hanaanka dejinteeda.
Waxaad isticmaali karaa browser warbaahinta si ay u sahamiyaan warbaahinta on your computer iyo drives ku lifaaqan sida halkan
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u ogaato meesha file waa habka ugu dhakhso badan waa in la isticmaalo file> dejinta inay soo qaadaan file nidaamka qalliinka interface browser caadiga ah iyo maraan si toos ah u sida halkan.
Ka dib markii faylka ka baaraandegidda, waxaad ku hadhay oo aad mashruuca diyaar u ah inay tagaan. Demi in Panel Project oo ay jirto warbaahinta laga keeno sida aan halkan ka arki kartaa.
Waxaad hadda soo jiidi kartaa file u galay Source iyo Jadwalka darfahoodii in shaqada u ku bilaaban sidii la mashruuc kasta oo kale.
2. Video reeban Camera
Noocyo ka mid ah camera video waxaa jira ilaa in la tuuri karaa arrimaha. Furaha marka loo dhoofiyo si toos ah uga soo saarka camera haddii aad ogaato arrimaha waa in la isticmaalo browser warbaahinta si ay u dajiyaan dhismeedka folder oo dhan wax soo saarka AVCHD ka camera ah, taasi hubinaysaa in wax files la xiriira loo baahan yahay waxaa ka mid ah la files MTS loogu isticmaalo. Waxaad aakhirka la dhibic isku final meesha clips waa in Panel Mashruuca diyaar u ah in lagu jiido gal waqtiga tafatirka.
Tani waa ka kooban yahay kaar ka Camera Panasonic ah tusaale ahaan
Haddaba camera Tan ayaan ku garanayaa video aydan xaraysan naftooda ku yaalaan gudahood gal gaarka ah, laakiin haddii aadan hubin in aad ka furan kartaa mid kasta oo ka bacdi, browser warbaahinta idin tusin files warbaahinta in kasta.
Inkasta oo xaaladaha ugu badan Ciyaar qabadsiin doonaa si toos ah, waxaa jira badhanka ugu sareysa si loo muujiyo noocyada file aad soo degida ah, hoos ku qoran waa folder gaarka ah noo leh badhanka soo bandhigeen in ay tahay in hab AVCHD.
Si fudud u dooro oo clips aad rabto in aad isticmaasho iyo iyaga soo dhoofsadaan.
Arrinta ugu weyn ee in habka aad dhoofinta waa waxa aad rabto in aad isticmaasho file kama dambaysta ah.
3. Dhoofinta in noocyada kale file
Wixii xaaladaha ugu badan tahay in aad Dooni inay ka jeedin files MTS galay wax kale, oo halkan habka la sameeyo si fudud kuu jilitaankii. Wixii YouTube ama la mid ah waxaad dooran lahaa qaab H.264, ka dibna isticmaal mid ka mid ah presets badan oo ka mid ah jilitaankii si loo waafajiyo madal, halkan aynu dooranay xallinta iyo jir horena heerka u YouTube in kulan naga footage asalka ah.
Doorashada iyo gujinaya dhoofinta ka abaalmarin doonaa isku xigxiga oo si toos ah u badalo gal nooca cusub file idiin, diyaar u Upload si dhexdhexaad ah sida aad doonayso inaad.
4. Dhoofinta sida file MTS ah
Si kastaba ha ahaatee waxaa jira xaalado aad ka heli kartaa in aad rabtid in aad sii qaab MTS ah. Oo jaleecada hore tani u ekaan tallaabo aad u fog, waayo, jilitaankii iyadoo ay xulashada kuma jirin, waayo, in menu qaabka sida aan halkan ka arki kartaa.
Laakiin waxaa jira xal. Ka hor inta aan helno in inkasta oo in, waxaan dhihi lahaa in tirada ugu badan ee mashaariicda iyo codsiyada, diinta file MTS ah xilligan la joogo waa tan ikhtiyaarka ugu fiican, iyo dadka intooda badan tani waa in wadada qaaday.
Waxa aad si dhab ah u badalo si Dabcan waa ay ku xidhan tahay sida video kama dambaysta ah waxaa loo isticmaali doonaa, laakiin waxaa jira fursado ku filan gudahood Ciyaar loogu talagalay wax ka badan ama ka yar ama looga baahan yahay.
Iyadoo in ka mid ah habka aanu ka eegi kartaa sida loo helo agagaarka la'aanta ah ee MTS goobaha qaab wada dhoofinta sida waxaynu ku muujinnay.
Waxa ugu horeeya ee la sameeyo waa loo muujiyo isku xigxiga la doonayo gudahood Timeline ama Project Panel, iyo maraan file> dhoofinta> warbaahinta inay soo qaadaan wada hadalka dhoofinta sida caadiga ah.
Waayo, qaabka, sida ay muujinayso ku image, waxaan ku xushay H.264 Blu-ray, oo halkan ka aynu dooranay horena in uu yahay kulanka ugu dhow naga footage asalka ah marka la eego xal iyo heerka jir.
Iyadoo in la doortay, haddii aynu eegno file saarka aannu si faahfaahsan waxaan ka arki karnaa in inkastoo goobaha dhigma file asalka sida aynu la doonayo, laakiin Magaca Output ayaa muujinaysa file waa file ah .m4v, taas oo aan qaab aan raadinayso sida iska cad.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad ka arki kartaa hoos ku qoran waxaan u wareegeen tab multiplexer ah, taas oo ay default dhigay 'ma jiro ". Haddii aan hadda ka dooro 'TS', fiiri waxa ku dhacaya nooca faylka.
Goobaha oo dhan waxaa weli tallaabadaas diirada inoo saaran oo tayo leh, xallinta iyo heerka jir, iyo faylka hadda waa, by default, outputting sida file m2t ah. Tani dhab ahaan waa qaab la mid ah, oo waxaad ku dari kartaa 's' on dhamaadka ah ee waafaqsan yahay dhibaato lahayn mar haddii la abuuray.
5. Abuuridda aad horena
Tallaabada ugu danbeysay ee aad halkan ka qaban kartaa haddii aad rabto in aad si joogto ah wax soo saarka si ay u files MTS waa si loo badbaadiyo goobaha sida horena caado.
Iyada oo dhammaan fursadaha aad dooratay meel, aad guji badhanka soo socda si menu horena aadeen sida tan.
Riixaya badhanka aad qaadataa si loo badbaadiyo wadahadalka horena kaas oo kuu ogolaanaya in aad magaca horena si ay wax xusuus leh si aad u ogaato waxa ay qabato
Ugu dambayntiina, haddii aad rabto in aad mar kale u isticmaali taariikh dambe, waa inaad ku doortaan sida horena wax kale halkan.
Waxaan rajeynayaa walkthrough waxa uu aad u muujisay in files MTS ma yihiin dhammaadka wakhtiga dunidu in ay la, xoogaa kaliya ee adag ee nidaamka oo dhan Keenista waa in la hubiyo in aad u ogolaato in ay jilitaankii 'eeg' Qaab-dhismeedka galka haddii saxaafada si toos ah soo socda shaqeeyaan ka camera ah, taasi xaqiijisay u keensada dhammaan macluumaadka kala duwan ee ay u baahan tahay oo ay la socdaan video ee tafatirka guulaha mashruuca.
Dhoofinta waxaa, sida aan ka arki kartaa, toos Marka aad ogaatid meesha doorasho la aasay, oo lagu badbaadinayo in sida horena ka dhigan tahay in ay had iyo jeer waxaa la click hal sidii horena kasta oo kale ee ku jira Ciyaar waa mustaqbalka.
Tani waa tutorial aasaasi ah oo ku saabsan Adobe jilitaankii, xirfad software video tafatirka. Si kastaba ha ahaatee, haddii video tafatirka waa cusub oo aad si, tixgelin Wondershare Video Converter Ultimate , taas oo ah aalad awood laakiin si sahlan loo isticmaalo dadka isticmaala kaliya bilaabaya. Oo weliba qaabab qaar ka mid ah si toos ah cann't la saxar ah, waxa kale oo aad u bedeli karaan qaabka ay u sixiddiisa la Software ah. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
> Resource > Video > Sida loo soo dejinta MTS in Adobe Ciyaar (CS3 / CS4 / CS5 / CS6 ka mid ah)